मेस्सी र रोनाल्डोभन्दा नेयमार र एमबाप्पे अगाडि ! | Hamro Khelkud
एजेन्सी– लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्नो पुस्ताका सफल स्कोरर हुन् । यसमा कसैलाई शंका छैन । यद्दपी यी दुई खेलाडीमा को उत्कृष्ट भन्ने बहस भने समय समयमा चल्ने गरेको छ । जे होस्, पछिल्लो एक दशक वा त्यो भन्दा बढी विश्व फुटबलको चर्चा यी दुई खेलाडीकै वरिपरि घुमेको छ ।
तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने यी दुई महान खेलाडीले भन्दा छिटो पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) का स्ट्राइकरद्वय नेयमार र केलियन एमबाप्पलेले खेल जीवनमा एक सय गोल पुरा गरेका छन् । नेयमार र एमबाप्पले २० वर्ष भन्दा केहि महिना बढीमा एक गोल गरिसकेका थिए ।
ब्राजिलियन स्टार नेयरमाले १ सय ७३ खेलमा सय गोल पुरा गरेका छन् भने विश्व कप विजेता २० वर्षे एमबाप्पेले भने १ सय ८० खेलमा उक्त सफलता प्राप्त गरेका छन् । यो सुचिमा मेसी तेस्रो र रोनाल्डो चौथो स्थानमा छन् ।
बार्सिलोनाका सुपर स्टार मेस्सीले सय गोल पुर्याउन २ सय १४ खेल कुर्नुपरेको थियो । सय गोल पुरा गर्दा उनी २२ वर्ष भन्दा बढी भइसकेका थिए । युभेन्ट्सका रोनाल्डोले भने सय गोलका लागि भन्डै तीन सय खेल पर्खनु परेको थियो । रोनाल्डोले २ सय ९८ खेलमा त्यो सफलता प्राप्त गरेका हुन् । त्यति बेला उनको उमेर २२ वर्ष ११ महिना थियो ।
सय गोलका लागि नेयमार र एमबाप्पले भन्दा बढी खेल कुर्नुपरे पनि अहिले मेसी र रोनाल्डोको क्षमतालाई लिएर प्रश्न गर्ने कमै हुन्छन् । दुवै उत्कृष्ट गोलकर्तामा परिचित छन् । मेस्सी र रोनाल्डोले खेल जीवनको सुरुवात विङ्गरबाट गरेपनि उनीहरु अहिले आ आफ्नो टोलीका मुख्य स्ट्राइकर रहेका छन् ।
१ सय गोलका लागि यस्तो छ तथ्याङ्क
१. नेयमार (२० वर्ष, १ महिना) – १ सय ७३ खेल
२. केलियन एमबाप्पे (२० वर्ष, ५ महिना)– १ सय ८० खेल
३. लियोन मेसी (२२ वर्ष, ३ महिना) – २ सय १४ खेल
४. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (२२ वर्ष, ११ महिना)– २ सय ९८ खेल